SingForYou.net - A May Pa Khet
A May Pa Khet
Tags : sch7677009 18
By : nanwarwarmg on Jan 14, 2010
Score: 120 Rating: 5.00 Comments: 27
A May Pa Khet's Description
ဖေဖေ Dr.Nyan+မေမေ နန်းဝါ၀ါမောင် တို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေး မေမြတ်နိုးခိုင် နားထောင်ဘို့ မေမေ့ရဲ့လက်ဆောင်.. (အားပေးကြတဲ့ မောင်နှမ များအားလုံး နဲ့ SFY တို့ကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်။) ကောင်းတော့ မကောင်းဘူးနော်..ကျန်တဲ့သီချင်းတွေလည်း မဆိုတတ်တော့ဘူးရယ်.း))
Ilovemusic on Jan 19, 2010 0
ta gal narr htaung lo kg par tel...mama war yay....pyaw shwin chan myae kya par say....
8 pout nae top ...phaarr ma kout nae naw..........ta kg ma ..ma ya bal nayy ohnn mal
tharnge123 on Jan 17, 2010 0
A yan kaung par tal Ama yay.********************************
rajmyitkyina on Jan 16, 2010 0
love it.***** for u. keep singing more for mom.
မ၀ါရေ ဒီသီချင်းလေးနားထောင်ရင်း အမေ့ကို လွမ်းလိုက်တာ . . . ဆိုထားတာလေး အရမ်းကောင်းတယ် . . . ***** . . .
seven on Jan 15, 2010 0
~~မေမြတ်နိုးခိုင်..လေးအတွက်..ဆိုထားတဲ့ ..သီချင်းလေးက.. အရမ်းကိုနားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်...အားပေးသွားပါတယ်နော် ***************************!!~~.
mrcastle on Jan 15, 2010 0
အစ်မရေ သမီးအကြောင်းသိပ်ကြော်ငြာမနေနဲ့နော် ။ ဟိုမှာ လှလှက လုပ်ကုန်ပြီ မေမေဝါတဲ့ :P ( ဒါလေးပဲဝိုင်းလုနေကြတာပဲနော် တယ်ခက်တယ် ) အရမ်းကောင်းတယ်အစ်မရေ ။ သမီးတွက် မေတ္တာတွေပါ ပါနေတော့ တကယ် ချိုမြိန်လှပတဲ့သီချင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ အစ်မရေ ။
a yan ko kg tar bae mama nan yay.... 5* :)))))
lovelybaby11 on Jan 15, 2010 0
ma ma yay,di the chin lay koayan kyite tal,di the chin ko so poe kyo sar tine mum koayan lwan pi ngo chin lar loe ma so pyit par pu,ma ma so twar tarayan kaung par tal****************for sis
romeo on Jan 15, 2010 0
shan ma lay yay...kg mha kg...wayyyy...
minla on Jan 15, 2010 0
so twr tar kg lite tar mama yal.. mother ko tg lwan twr tal... :clap :clap :clap
naymin15 on Jan 15, 2010 0
lalaynge on Jan 15, 2010 0
မဝါရေ.. နားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာ.. ကျနော်လဲ အမေကိုလွမ်းသွားပီ..*********
ngenge09 on Jan 15, 2010 0
မမရေ အရမ်းကိုနားထောင်လို့ကောင်းတယ်သိလား ။မမ သမီးက မေမေ ညတိုင်း ဆိုပြဆိုပြီးဖြစ်သွားမှား) ဆုလည်း ဒီသီချင်းလေးကို မမဆိုတာအရမ်းကြိုတ်တယ်း) *****
whitekisslay on Jan 15, 2010 0
Mama nan warwar yay....ayann chit sayar kaung tal thichin layy 1pote par~...narr htaung lol lae thiet kaung par tal~~....***************par ma yay:)
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ..သီချင်းရော..ဆိုတာရော.. အဲသီချင်းလိုချင်နေတာ ကြာပြီ.. အမေ့ကို လွမ်းလိုက်တာ...
kaung hla par tal ama taw gyi nan yae...
nanwarwarmg on Jan 15, 2010 0
ဟုတ်ပါရဲ့လား SCH ရေ.. အမှတ်နည်းလာပြီ..SCHရဲ့50Credits ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဦးမှပဲ.. :P
ngeloveuforever on Jan 15, 2010 0
မကောင်းလို့သာပဲမဝါရေ... သမီးလေးမခိုင်တော့ကံကောင်းတာပဲ အိပ်ယာဝင်သီချင်းလေးပေါ့နော်။ အားပေးသွားပါတယ်မဝါရေ။ 5***** for you.
KoBurma on Jan 15, 2010 0
အရမ်းဂွတ်ဒယ် .... သူ့ ထက်ဂွဒ် တာတောင် သူ့ လောက် မဂွဒ် ဘူး .... ဟက်ဟက်ဟက်စ် .... ၅စတားစ် .... တကယ့်အဆိုတော် တယောက် ဆိုထားသလိုပါပဲ ...
sithunaung on Jan 15, 2010 0
so nice to listen sister.. arr pay ner sin twer per tal ..5********
forevermoe on Jan 15, 2010 0
mama warr yayy..a yan chit po kg tae song lay parr ...ma voice lay nae lae lite tal ma ...listen ya tar lae yin htae mhar ta myoo paee ..**********************************
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေး မိုးရေ.. မေမေ့ကိုလွမ်းပြီး ၀မ်းနည်းသွားသလား. လွမ်းနဲ့နော်.. လွမ်းရင် သီချင်းတွေ ဆိုပလိုက်.း)))
susannyunn on Jan 15, 2010 0
mama yay... tamee nge layatwet.....khan sar tee sho thwar tar....a yan ko kyi nuu sayr kg par te..... susan lelz mom ko ta di ya lite tar........:dream....ayan listen loz kg te chint....bravoooooo....:clap :clap :clap.>>>>>
ညီမလေးလည်း မေမေ့ကိုလွမ်းသွားတယ်လား.. ညီမလေးဒီသီချင်းလေးကို ဆိုထားတာလေးက အရမ်းပိုကောင်းပါတယ်..မမက ကြောင်ကြီးကိုက်လိမ့်မယ်မှာ ကြောင် ကြောင် ကြီး ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်လေ. :P
Phyogyi on Jan 15, 2010 0
မနန်းရေ...သီချင်းကောင်းလေးကို...အကောင်းဆုံးဆို သွားတာပါဗျာ..အရမ်းကိုနားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ် ဗျာ....အစ်မအသံနဲ့ လည်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ...Many*** ****************..ပါဗျာ....နားထောင်အားပေး သွားပါတယ်အစ်မရေ....:))))))))))))............ဖြိုးကြီး..
အရင်ဆုံးလာအားပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဖြိုးကြီးရေ.း)
Subscribe to nanwarwarmg